RASMI: Kooxda Tottenham oo dhammaystirtay saxiixa Pierre-Emile Hojbjerg… (Lambarkee ayuu u qaadan doonaa Spurs?) – Gool FM
(London) 12 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa ku dhawaaqday inay dhammaystirtay saxiixa Pierre-Emile Hojbjerg, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga Southampton.
Laacibkan khadka dhexe ee Hojbjerg ayaa dhowaan tijaabada caafimaad u maray Tottenhan, waxaana uu baaritaankaas ku maray xera tababarka Spurs, iyadoo haddana si rasmi ah loogu dhawaaqay dhammaystirka heshiiskiisa.
25-sano jirkaan ayaa kooxda uu hoggaamiyo Tababare Jose Mourinho ugu biiray Adduun dhan 20 milyan oo gini.
Bayaan ay soo saartay kooxda Tottenham ayay ku xaqiijisay saxiixa ciyaaryahankan, waxaana uu u dhignaa qoraalkaas: “Waxaan ku farraxsannahay inaan ku dhawaaqno saxiixa Pierre-Emile Højbjerg kaasoo nooga yimid Southampton.”
Xiddigan khadka dhexe ayaa kooxda Tottenham u saxiixay qandaraas ku eg illaa sanadka 2025-ka, waxaana uu kooxda Spurs u xiran doonaa lambarka 5-aad.
Dhinaca qarankiisa haddii aynu eegno waxa uu u saftay xulkiisa Denmark 33 kulan, isagoo 18 sano jir ah ayuuna kulankiisii ugu horreeyey ee xulka uu yimid ciyaar ay 1-0 guul kaga gaareen Sweden taasoo dhacday bishii May ee sanadkii 2014-kii.